Marka La Igu Xukumo In Aan Bixiyo Lacagta Daryeelka Caruurta | LawHelp Minnesota
Marka La Igu Xukumo In Aan Bixiyo Lacagta Daryeelka Caruurta
Maxaan yeelayaa ka dib marka uu amarku i soo gaaro?
Degmo kasta waxa ay leedahay xafiis qaabilsan lacagta daryeelka caruurta (Child support). Xafiiska waxaa lagu magaacaabaa xafiiska IV-D (“Four D Unit”). Hadii aad gargaar ka hesho Barnaamijka Gargaarka Qoyska ee Minnesota (MFIP) ama gargaarka kale ee dadweynaha, Xafiiska IV-D si toos ah ayuu u bilaabayaa ururinta lacagta daryeelka caruurta. Haddii aan lagu siin gargaarka, waa in aad caawinaad ka codsataa Xafiiska IV-D. Xafiisku kuma caawinayo haddii aadan codsan. Xafiiska IV-D waxaa waajib ku ah inuu ku caawiyo si laguu siiyo lacagta taageerada caruurta. Si aad u hesho adeegga la xiriir xafiiska lacagta daryeelka caruurta (Child support).
Soo booqo https://mn.gov/dhs.
Guji (Dadka Aan U Adeegno “People We Serve”)
Guji (Caruurta iyo Qoysaska “Children and Families”)
Guji (Adeegga “Services”)
Guji (Lacagta daryeelka caruurta (Child support).
Guji (Nagala soo xiriir “Contact Us”)
Guji “xafiiska lacagta daryeelka caruurta” ka dibna raadi magaca degmada
Goorma ayey ii bilaabaneysaa in la i siiyo lacagta daryeelka caruurta?
Waxa ay qaadan kartaa ilaa 3 bilood ka hor inta aanu kuu bilaaban lacagta daryeelka caruurta. Haddii aad heysato amar maxkamdeed oo amraya in waalidka kale lacag bixiyo, oo aad caawinaad ka codsatay IV-D si ay lacagta kuugu soo ururiyaan, waxa ay gal kuugu furayaan ilaa 20 cisho. waxa ay heystaan ilaa 15 cisho in ay gaarsiiyaan goobta shaqada ee waalidka kale si lacag looga soo jaro.
Loo shaqeeyaha waa inuu ka jaraa mushaharka shaqaalaha 14 cisho gudahood laga bilaabo marka uu soo gaaro amarka lacagta daryeelka caruurta oo lacagtaas u soo diraa Xafiiska IV-7 cisho gudahood ka dib. Ka dib Xafiiska IV-D waa in 2cisho gudahood kuugu soo diraan lacagta daryeelka caruurta.
Haddii aad qaadato gargaarka MFIP, waxaa lagu siinayaa lacagta daryeelka caruurta, MFIP lacagta caddaanka ah waa layreynayaa 2 bilood.
Waxa aad qaadan kartaa lacagta daryeelka caruurta ilaa $100 bishiiba iyo ilaa $200 bishiiba haddii aad heysato 2 caruur ah ama ka badan iyada oo aan la yareyn MFIP.
Haddii aad qaadato MFIP, gargaarka heynta caruurta ee degmada, ama gargaarka Caafimaadka (Ceymiska) (MA), IV-D waxa ay kaa reebeysaa qeyb ka mid ah lacagta daryeelka caruurta si loogu bixiyo lacagta heynta caruurta iyo kaarka caafimaadka.
Haddii aadan qaadan MFIP, gargaarka heynta caruurta, ama MA, Xafiiska IV-D waxa ay kaa goynayaan 2% oo lacagta ay ka soo jaraan waalidka kale oo ah kharashka maamulka waxaana suurogal ah in lagaa qaado lacag sanadle ah oo dhan $25.00.
Sidee ayaan ku ogaanayaa haddii xafiiska IV-D uu gal lacagta daryeelka caruurta iiga furan yahay?
Minnesota waxa ay leedahay khadka lacagta daryeelka caruurta iyo bogga internetka oo aad kala socon karto bixinta lacagta. Waxa aad soo wici kartaa 7da cisho ee todobaadka, 24ka saac ee maalin kasta.
Waxa aad khadka telefoonka ka ogaan kartaa:
Taariikhdii ugu dambeysay ee la bixiyey lacagta daryeelka caruurta.
Lacagtii la bixiyey 90 maalmood ee ugu dambeeyey.
Lacagta lagu leeyahay waalidka kale iyo
Magaca iyo telefoonka qofka shaqaalaha ee dawcadaada gacanta ku haya
Magaaloyinka mataanaha ah (651) 431-4340
Gobolka Minnesota oo dhan 1-(800)-657-3512
Haddii uu maqalku kugu adag yahay soo wac (651) 431-4342 magaalooyinka mataanaha ah ama 1-(888)-234-1208 dhulka ka baxsan magaalooyinka mataanaha ama isticmaal Khadka Fariimaha ee 711.
Ama soo booqo: www.childsupport.dhs.state.mn.us/Action/Welcome
Ma isbedeli kartaa lacagta daryeelka caruurta?
Haa. Lacagta daryeelka caruurta waa ay isbedeli kartaa haddii dhaqaalaha ama baahida caruurta ay isbedesho oo amarkii hore uu ekaanayo mid aan cadaalad aheyn. Sidoo kale, waxaa kale oo ka dhigi kartaa mid la socdo kororka kharashka ku baxa nolol maalmeedka 2dii sano ee kasta. Ma dhaqan gelin kartid heshiis lacagta daryeelka caruurta ilaa ay dhinaca kale ay maxkamaddu amarto.
Maxaa la iiga baahan yahay in aan soo bandhigo si wax looga bedelo lacagta daryeelka caruurta?
Minnesota waxa ay leedahay sharciyo u gaar ah oo ku saabsan lacagta daryeelka caruurta. Sharciyadaas waa kuwo ku saleysan wadaagga dakhliga. Wadaagga dakhliga waxaa lacagta daryeelka caruurta la tixgeliyaa wadarta dakhliga soo gala labada waalidka. Dakhliga guud waxaa loola jeedaa lacagta shaqada kaa soo gasha inta aan canshuurta laga jarin.
Waalidka doonaya in wax laga bedelo lacagta daryeelka caruurta waa inuu soo bandhigaa inuu soo jiro isbedel tan iyo intii la soo saray amarkii ugu dambeeyey oo waajib ka dhigaya isbedel lagu sameeyo lacagta daryeelka caruurta. Isbedelkaas waxaa ka mid noqon kara:
Isbedel balaaran oo ku yimaada dakhliga ama baahida mid ka mid ah labada waalid.
Isbedel balaaran oo ku yimaada baahida caruurta.
Kharashka caafimaadka ilmaha oo kordhay
Kharashka ilmaha lagu hayo oo isbedelay.
Maxkamaddu ma bedeleyso amarka maxkamadda ee lacagta daryeelka caruurta haddii aanay kordhin ama hoos u dhicin ugu yaraan 20% iyo $75.
Sidee ayaan ku ogaadaa korodhka sicirka nolosha?
Dhamaan amarada lacagta daryeelka caruurta waxaa ku qoran isbedelka maciishadda (COLAs). Taasi waaxa ay ka dhigan tahay in lacagta lagu siiyo ay mararka qaarkood kordhi karto. Haddii aan waalidka kale dakhligiisu kordhin ama aysan ku xusneyn in si caadi ah lacagta loo kordhiyo, maxkamaddu waxa ay u tixgelin kartaa xaalad gaar ah.
Tirada COLA ee lakordhiyo waa mid ku xiran sicir bararka. Waxaa laga yaabaa in la kordhiyo mar 2dii sanaba. Haddii xafiiska IV-D kula shaqeynayaan waxaa laga yaabaa in ay si toos ah u kordhiyaan. Haddii xafiis IV-D kula shaqeynayo, waxaa lagaa doonayaa in aad maxkamadda tagto si loo kordhiyo.
Sidee ayaan ku codsan karaa in wax laga bedelo lacagta daryeelka caruurta?
Si wax looga bedelo lacagta taageerada caruurta, weydii shaqaalaha kula shaqeeya Dadajinta Nidaamka Lacagta Daryeelka Caruurta. Waxa ay ka caawisaa in waalidintu ay iska fahmaan dhibaatooyinka la xiriira lacagta daryeelka caruurta.
Waraaq u soo qor shaqaalaha lacagta daryeelka caruurtaoo weydiiso in wax laga bedelo amarka maxkamadda. Waxaa jira foom ku lifaaqan xogta urursan. Nuqul (koobi) ka reebo.
Xafiiska IV-D waxa ay bilaabayaan dacwadaada ama waxa ay ku soo dirayaan waraaq “diidmo” oo ay kuugu sheegayaan in aysan ku caawin karin.
Haddii xafiiska IV-D ku diidaan, weli iskaa waad u tagi kartaa maxkamadda.
Haddii ay go’aansadaan in ay ku caawiyaan, waxa ay qoraan warqadaha wax looga bedelayo lacagta daryeelka caruurta oo aad gaarsiisaa waalidka kale. Haddii uusan waalidka kale diidaneyn ama codso 14 cisho in lagu qabto dhageysiga, lacagta daryeelka caruurta waa la bedeli karaa.
Haddii aan la heyn macluumaad ku filan, ama waalidka kale uusan diidaneyn, waxaa la qabanayaa dhageysiga.
Sidee ayaa inta badan dib loogu eegaa lacagta daryeelka caruurta?
Xafiiska IV-D waa in ay dib u eegaan amarka lacagta daryeelka caruurta hal mar sadexd sano ee kasta. Waxa aad weydiisan kartaa in wax laga bedelo lacagta daryeelka caruurta hadiii uu amarku yahay mid sadex sano ka yar, laakiin xafiiska IV-D waajib kuma aha in ay ku caawiyaan.
No. But if there is a hearing, you may want a lawyer. Someone from the IV-D Unit may come to the hearing and ask for child support but the IV-D Unit does not represent either parent.
In xafiiska IV-D la maro oo kaliya miyaa wax looga bedeli karaa lacagta daryeelka caruurta?
Maya. Maxkamadda ayaa bedeli karta lacagta daryeelka caruurta mar kasta oo laga hadlayo cida caruurta la nool, booqashada ilmaha, qeybinta hantida, ama xadgudubka qoyska, ama waxa aad weydiisan kartaa in wax laga bedelo lacagta daryeelka caruurta.
Sidee ayaan ku ogaanayaa haddii uu waalidka dakhliga fara badan soo galo?
2dii sano ee kasta waxa aad waalidka kale ka codsan kartaa inuu ku siiyo nuqul ka mid canshuurta uu xareeyo.
Maxaan yeelayaa haddii waalidka kale uusan lacagta bixin?
Lacagta daryeelka caruurta looma aqoonsado wax aan la bixin ilaa 30 maalmood ka soo wareegto. Xafiiska IV-D waxa uu qaban karaa dhawr shay oo kaa caawin kara in aad lacagta hesho.
Lacag ka jarid toos ah. Haddii amarka lacagta daryeelka caruurta aysan ku cadeyn in laga jaro jeegga waalidka kale, waxa aad weydiisan kartaa in laga soo jarojeegga waalidka kale marka ugu horeysa oo 30 maalmood la daaho.
Fulin la’aanta amarka maxkamadda Waxa aad weydiisan kartaa in maxkamaddu ku qaado in aanu fulin amarka maxkamadda. Waa inuu jiraa dhageysi maxkamadeed. Haddii ay maxkmaddu go’aan ku gaarto in waalidka kale laga doonayey in uu bixiyo lacagta daryeelka caruurta, laakiin uusan bixin waxaa lagugu qaadi karaa in aadan fulin amarka maxkamadda. Haddii uusan waalidka kale bixin lacagta daryeelka caruurta, waxaa loo diri karaa xabsi.
Canshuur Celinta Haddii waalidka kale lagu leeyahay $500 oo lacagta daryeelka caruurta oo ku baaqatay, canshuurta uga soo noqota dawladda dhexe iyo gobolka ayaa laga qaadan karaa si loo bixiyo lacagta daryeelka caruurta. Haddii waalidka kale lagu leeyahay wax ka badan 1 bil oo lacagta daryeelka caruurta ah, canshuurta u soo noqoto ayaa laga bixinayaa.
Ka joojinta wadista gaariga Marka waalidka kale lagu yeesho ugu yaraan 3jeer taageerada lacagta daryeelka caruurta ee bil kasta, gobolka ayaa ka joojiya ogolaashaha (leesinka). Waxa uu noqon karaa leesinka gawaaarida, ama leesinka shaqada ee gobolku siiyey, sida timo jarayaasha, ama leesinka goobaha dadka lagu qurxiyo.
Leesinka waa laga joojiyaa ilaa uu bilbaabo bixinta lacagta daryeelka caruurta. Waxa kale oo gobolku ka joojin karaa leesinka ugaarsashada, kaluumeysiga, doomaha iyo leesinada kale.
Warbixinta deyn qaadashada Xafiiska IV-D waxa ay warbixinta waalidka aan bixin lacagta daryeelka caruurta u gudbin karaan xafiisyada warbixinta deyn qaadashada.
Rahmad Xafiiska IV-D waxaa waajib ku ah in ay rahmad dulsaaraan hantida ma guurtada ah ee guryaha ama hantida qofka (gawaarida, doomaha, iwm) ee waalidka aan bixin lacagta daryeelka caruurta. Haddii guriga rahmad la dul dhigay, ama hanti kale, lama iibin kaaro ilaa rahmadda laga dul qaado.
Marka ugu horeysa oo maxkamaddu goyso lacagta daryeelka caruurta, waxa aad ka codsan kartaa in la qabto dhageysi lagu xaqiijinayo in waalidku bixiyo lacagta daryeelka caruurta. Waxa aad dhageysiga codsan kartaa oo kaliya lixda bilood ee ugu horeysa amarka ugu horeeya. Maxkamaddu waxa ay amarka ku lifaaqeysaa foomka aad ku codsan karto dhageysiga. Waa in aad buuxisaa foomka oo aad dib ugu soo dirtaa maxkamadda iyo dhinaca codsanaya dhageysiga.
Sidee ayaan ku xaqiijin kartaa in aan helo lacagta laga soo qaado waalidka kale?
Shaqaalaha u gudbi dhamaan macluumaadka aad ka ogsoon tahay waalidka kale. Tusaale ahaan, haddii aad in waalidka kale uu shaqada bedeshay ama guuray, gaarsii shaqaalaha sida ugu dhaqsaha badan.
Maxaan yeelayaa haddii aan ka cabanayo xafiiska IV-D?
Waraaq u qor madaxa xafiiska xafiiska qaabilsa lacagta daryeelka caruurta (IV-D) La socodsii waxyaabaha aad ka tirsaneyso xafiiska IV-D iyo sababta aad ugu heysato in ay taasi khalad tahay. Soo raaci cinwaankaaga, taariikhda, iyo lambarka dacwadda. Nuqul (koobi) ka reebo warqadda. Haddii aad degan tahay degmada Hennepin, waxa aad la xiriiri kartaa U doodaha Macaamiisha ee 612-348-3333.
Haddii aan cabashadaada wax laga qaban 30 cisho gudahood. Waraaq u qor:
Haddii aanay taasi waxba bedelin, waraaq u soo qor::
Child Support Enforcement (Dhaqangelinta Lacagta Daryeelka Caruurta)